Isikhathi sokuqala isiphakamiso sokugubha uMashi 8, ukunqoba komzabalazo wesigamu esihle somuntu sokulingana, kusho uClara Zetkin. Lokhu kwenzeka ekuqaleni kuka-1910, lapho kuqhutshwa umhlangano wabesifazane bezenhlalo. Isinqumo sokukhetha lolu suku oluthile luxhunyiwe nenkumbulo yabasebenzi befektri eNew York. Ngo-1857, bathatha emigwaqweni yedolobha baqala ukufuna ukunciphisa usuku lokusebenza kusuka emahoreni angu-14 kuya ku-10, kanye nokuthuthukisa izimo zokusebenza. Kusukela ngo-1911, ngemuva kweMemorandum amazwe amane, okuyiDenmark, eJalimane, eSwitzerland nase-Austria baqala ukugubha iSuku Lwabesifazane LwaseMhlabeni Wonke. Kodwa kusukela ngo-1913, i-Russia nayo ijoyine. Kodwa akuzona zonke amazwe ezigubha leli holide.
Yimaphi amazwe agubha ngoMashi 8?
Phakathi nokusebenza kwezempi ka-1914, abantu baseYurophu bakhohlwa ngaleli holide. Kodwa, emva kokuba abaseBolshevik befika emandleni, usuku lwentwasahlobo lwentwasahlobo lwaqala ukugubha futhi. Kwaphela iminyaka eminingana ensimini yaseRussia ngoMashi 8, amantombazane awazange athole izipho, ngoba leli holide lalibhekwa njengezombusazwe, ngalolo suku lwama-rallylies kanye nemihlangano yenzeka. Ngemuva kokuhamba kukaStalin, kwavela isiko lokunikeza ama-tulips, futhi kakade ngo-1965 leli holide yaba yisiholide somthetho.
Kumaphi amazwe ngoMashi 8 ngeholide? Isibonelo, e-Ukraine, eBelarus naseRussia, kwakhiwe indlela ekhethekile kakhulu yosuku lwabesifazane. Usuku lwe-Spring lwaba usuku olusemthethweni. KuSuku Lwabesifazane LwaseMhlabeni wonke lapha ukujabulisa abesifazane abathandekayo, banikeze izipho nezimbali. Kucatshangwa ukuthi intwasahlobo yisikhathi sothando, ukuqala kokuphila okuhle okuvela eqabeni elihlanzekile, ukubukeka kwezimbali nemifino. Futhi akukhona ngeso lengqondo ukuthi ngalesi sikhathi amadoda alala ngokuhalalisela ngabesifazane, ngoba zikhanya ngokumomotheka okukhulu.
Mashi 8 ngesiJalimane nesiFulentshi
IJalimane elinye izwe lapho ligubha khona ngo-Mashi 8, kodwa ngendlela yabo. Lolu suku alulona ngempelasonto, ngoba lusekelwe kumlando wezenhlalo. Ngisho nangaphambili, lapho izakhamizi zaseMpumalanga Jalimane zihalalisela amantombazane, azizange zizwe ngisho nangomcimbi onjalo engxenyeni esentshonalanga yezwe. Ngemuva kokuhlanganiswa kombuso, usuku lwentwasahlobo lube nokusabalalisa okuthile. Kodwa, kungakhathaliseki ukuthi kungenzeka kanjani, isiko esicacile sokugubha kwayo asizange siphumelele. Naphezu kokuthi emithonjeni yolwazi lomphakathi ibhaliwe ngeholidi labesifazane, amaJalimane abethulela ukuhalalisela nezipho kubesifazane ngosuku lukaMama, oluwela ngenyanga kaMeyi. Kulolu suku, abesifazane abathandekayo bayakhohlwa ngemisebenzi ehlukahlukene yasendlini kanye nezinkathazo.
Ngokuqondene neFrance, akuyona into engokwesiko lapha ukugubha ngoMashi 8. Imithombo yolwazi yisho lo mcimbi, kodwa kuthiwa ihlonishwa, ikakhulukazi ngamaKhomanisi nalabo abangakwesobunxele. Abesifazane basendaweni bazozizwa njengamakhosikazi angempela ngosuku lukaMama, kugujwa ekuqaleni kukaMeyi. Lapha nje kuphela ukuhlazeka okuthile, ngoba lokhu kunqoba akuthinti nakancane amantombazane amancane. Lapha, njengomthetho, bahalalisiwe ngoSuku Luka-Valentine.
Izici zeSuku Lwabesifazane Lomhlaba Wonke LamaNtaliyane
I-Italy ingokwaluhlu lwalawo mazwe lapho uMashi ka-8 kugujwa khona. Kusukela ngo-1946, i-mimosa ivela kuleli zwe njengophawu lomhla wesifazane. Kusukela ngaleso sikhathi umkhuba wazalwa ukunikeza le ntombazane kwabesifazane. Lokhu kudingekile ukuthi uqaphele ukuthi leli holide lapha akusilo usuku oluvuliwe. Gubha usuku lwabesifazane ngokufanayo ngendlela ekhethekile. Okuthakazelisayo kakhulu ukuthi abesifazane abasisebenzisi lo mkhosi namadoda abo, kodwa bahlangana eqenjini elijabule baya e-restaurant noma cafe. Kusihlwa, kulo lonke elaseRoma, imigoqo ehlukahlukene ivuliwe ngehlelo olukhethekile oluvela kubahlukumezi. Ukungena kwabesifazane kulezi zikhungo kuyinkululeko. Uma sikhuluma ngezikhungo ezibiza kakhulu, njengezindawo zokudla, khona-ke ukungena kwamadoda ase-Italy akuvunyelwe lapha. Kuleli zwe, bakholelwa ukuthi ngo-Mashi 8, izinkampani zesifazane kuphela ziza lapha, futhi amadoda afike ekupheleni kokuhlwa futhi akhokhele umthethosivivinywa.
Kukhona nabesifazane abanjalo abafuna ukugubha leli holide ngesigamu sabo sesibili. Kulokhu, bahlangana ndawonye etafuleni lokugubha. AmaNtaliyane athanda ngo-Mashi 8, futhi, ukuthi yini enhle, bayakwazi ukuyigubha. Etafuleni lokugubha isici esiyinhloko yi-mimosa.
Usuku lwabesifazane ngesiBulgaria
IBulgaria ingabalelwa enani lamazwe lapho kugubha khona ngoMashi 8. Into ewukuthi, njengamanye amazwe amaningi, ihamba nsuku zonke. Kwabahlali bendawo, lo msebenzi usuku olulula, ngakho-ke amadoda anethuba elihle lokunikeza amazwi abo afudumele hhayi kuphela kwabesifazane abathandayo, kodwa nakwabasebenza nabo emsebenzini. Ngokuvamile ngalolu suku, ngemuva kokuphela kwamahora okusebenza, amatafula etikhatsini ahlelwe emahhovisi, noma bonke abasebenzi baya endaweni yokudlela.
Eminyakeni yamuva, kulabo besifazane abahlala eBulgaria, ngezizathu ezihlukahlukene, isimo sengqondo soSuku lwabesifazane lwaMazwe ngamazwe selulihlile kancane, abanye sebevele baqala ukubona ukuthi lolu suku luyisibonakaliso sezikhathi zenhlalo. Kodwa, naphezu kwakho konke, leli liholide elihle, lapho kungenzeka khona ukukhuluma amazwi anomusa kumuntu ozalwayo, uhlele inganekwane futhi unikeze umoya omuhle.
Ukugubha ngo-8 Mashi ku-China
I-China ayikwazi ukubhekwa emazweni lapho igujwa khona ngoMashi 8. Lolu suku lwamaphesenti omphakathi wendawo aluboni kahle. Labo kuphela abangathola izincwadi ezisemthethweni zokubongela ngalolu suku yizimpinduko ezindala. Ngaphezu kwalokho, eChina akuvunyelwe ukwethula kunoma yiziphi izimbali ezisikiwe. Ngakho-ke, ngosuku lweholide, izimbali zithengwa kuphela ngabokufika, ikakhulukazi amaRashiya.
Usuku lwabesifazane eVietnam
Ngokokuqala ngqa lapha abesifazane baqala ukuhalalisela eminyakeni engaphezu kwezinkulungwane ezimbili edlule. Khona-ke leli holide yayizinikezelwe enkumbulweni engunaphakade yabodade abangamaCing abanesibindi - izishoshovu zempi yokukhulula ngokumelene nobudlova baseChina. Kuze kube manje, uMashi 8 ubhekwa njengomkhosi osemthethweni, ogujwa ngenjabulo enkulu. Ngakho-ke, uma ubuzwa ukuthi kuphi emhlabeni ozogubha ngoMashi 8, ungaphendula ngokuphepha ukuthi eVietnam.
Usuku lwabesifazane baseLithuania International International
Ngemva kokuhlukaniswa eSoviet Union, iLithuania yaqeda ngokusemthethweni ukugubha iSuku Lwabesifazane LwaseMhlabeni Wonke, kodwa izakhamuzi zaseRussia zisalondoloza amasiko omkhosi. Kuphela manje okwamanje eLithuania, iholidi labesifazane libonwa njengokuqala kwentwasahlobo futhi libizwa ngokuthi iSuku Lwabesifazane Lwabesifazane LwaseMhlabeni Wonke. Iningi labantu besifundazwe ngo-Mashi 8 lihlotshaniswa nezikhathi zaseSoviet. Kulolu suku, njengasePoland, zonke izicucu zezimbali ziyasebenza, futhi izinga lokuthengiswa kwezimbali liphakeme kuneSonto lika-Valentine.
Amasiko aseRussia ngoMashi 8
Abantu abaningi banesithakazelo kumbuzo wamazwe okugubha ngoMashi 8. Omunye wabo yiRussia. Futhi bheka kwakukhona amasiko akhethekile ahlobene naleli holide. Ngosuku lwesifazane phakathi kwesigamu esihle sesintu akukho ukuhlukaniswa. Ngokuqinisekile konke, ngisho ncane kunazo zonke, kuyathokoza. Yiqiniso, njengamanye amazwe amaningi, izimbali ziyisipho sendabuko. Ngo-Mashi 8, abesifazane bakhululiwe kuzo zonke izibopho zasekhaya. Ukupheka, ukuhlanza nezinye imisebenzi zasendlini ziphathwa ngamadoda.
Iholidi lingabesifazane besemhlabeni wonke
Ngeshwa, namhlanje kunamazwe ambalwa lapho begubha khona ngoMashi 8. Ngakho-ke, iqiniso lokuthi leli holide liyizwe lonke libuzwa. Izindaba ezinhle kuphela ukuthi wonke amazwe aneholidi labesifazane. Ngokuqinisekile akunandaba, njengoba kubizwa, into esemqoka ukuthi amadoda angakhohlwa ngomkabo, omama, amadodakazi, odadewabo. Abesifazane bathanda ukunakwa, ngakho ungakhohlwa ngabo!
Izigcawu ezinemibala emibalabala zihambisana nezindlovu zangaphakathi